High Quality Full Threaded Rods Manufacturer and supplier | Yanzhao
A na-ejikarị eriri eri zuru ezu, dị ngwa ngwa dị ngwa nke a na-eji n'ọtụtụ ngwa ngwa. A na-agbanye mkpara site na otu nsọtụ gaa na nke ọzọ ma na-akpọkarị mkpara zuru oke, akara mkpanaka, mkpanaka TFL (readgha Ogologo Ogologo), ATR (Mkpịsị ụkwụ niile) na ọtụtụ aha ndị ọzọ na acronyms. A na-enwekarị mkpanaka ma na-ere ya na 3′,’Onwuchekwa’ na 12’ ogologo, ma ọ bụ ha nwere ike gbanye ogologo. A na-akpọkarịrị eriri eri niile e mere ka ọ dị mkpụmkpụ karịa mkpịsị ụkwụ.eriri studs zuru ezu enweghị isi, na-agbanye ogologo ha dum, ma nwee ike mgbatị dị elu. A na-ejikarị mkpụrụ osisi abụọ ejiri mkpịsị osisi a mee ihe na ihe ndị a ga-agbakọta ma gbasasịa ngwa ngwa. Na-arụ ọrụ dị ka ntụtụ nke ejiri ihe abụọ iji jikọọ ihe abụọ A na-eji eriri na-ejikọ osisi ma ọ bụ ígwè. igwe anaghị agba nchara, alloy nchara na carbon ígwè ihe nke ana achi achi na ihe owuwu anaghị’t daa mbà n'ihi nchara.
A na-eji mkpara eri zuru ezu na ọtụtụ ngwa ngwa dị iche iche. Enwere ike itinye mkpara ndị ahụ na mbadamba ihe ndị dị ugbu a ma jiri ya dị ka arịlịka epoxy. Enwere ike iji akara dị mkpirikpi tinye ya na ngwa ọzọ iji gbatị ogologo ya. A pụkwara iji eri niile dị ka ihe ndị ọzọ dị ngwa na mkpanaka arịlịka, ejiri ya mee njikọ njikọta Flange, ma jiri ya mee ihe abụọ na-ebu agha na ụlọ ọrụ akara osisi. E nwere ọtụtụ ngwa ngwa ndị ọzọ akpọghị aha ebe a ka ejiri mkpịsị eri ma ọ bụ eri eri zuru ezu.
Black-oxide nchara kposara na-adị nwayọọ na-eguzogide ọgwụ na gburugburu akọrọ. Zinc-plated nchara kposara iguzogide corrosion na mmiri gburugburu. Black ultra-corrosion na-eguzogide-ntekwasa ígwè kposara iguzogide Chemicals na idi 1000 awa nke nnu spray.Coarse eri bụ ndị ụlọ ọrụ ọkọlọtọ; họrọ ndị a kposara ma ọ bụrụ na ị na-amaghị eri kwa inch. Ezi na mmezi-ezi eri na-spaced spacte gbochie loosening si vibration; ihe kachasị mma na eriri ahụ, ka mma nguzogide ahụ.Grade 2 bolts na-ejikarị rụọ ọrụ maka ijikọta akụkụ osisi. A na-eji ọkwa 4.8 eme ihe na obere engines. N'uzu 8.8 10.9 ma ọ bụ 12.9 bolts na-enye nnukwu ike ọdụdọ. Otu uru bolt fasten nwere karịa welds ma ọ bụ rivets bụ na ha na-enye ohere maka mfe disassembly maka mmezi na mmezi.
P Ezighi ezi ezé 0.4 0,45 0,5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2,5
Ezigbo ezé / / / / / / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Ezigbo ezé / / / / / / / / 1 1.25 / / /
ibu ibu(Nchara)≈n'arọ Ogugu 18.7 30 44 60 78 124 177 319 500 725 970 1330 1650
P Ezighi ezi ezé 2,5 2,5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
Ezigbo ezé 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ezigbo ezé / / / / / / / / / / / /
ibu ibu(Nchara)≈n'arọ 2080 2540 3000 3850 4750 5900 6900 8200 9400 11000 12400 14700
Nke gara aga: Ugboro abụọ End Stud bolts
Osote: Ewepụghị Washers
Nnukwu Ike Hex Bolts, Din6921 Flange Mkpụrụ, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Black Oxidation Hex mkpọchi, Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi, Mkpọchi,